Ny sidina Wizz Air Malaga sy Dortmund dia miverina any amin'ny seranam-piaramanidina Budapest
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny sidina Wizz Air Malaga sy Dortmund dia miverina any amin'ny seranam-piaramanidina Budapest
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao Momba ny Hongria • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Wizz Air dia nandefa ny asa ho serivisy isan-kerinandro amin'ny toeran-kaleha roa amin'ny volana Mey, izay efa manamafy ny fiakaran'ny hafanana amin'ny volana Jona ka hatramin'ny rohy indroa isan-kerinandro.
Wizz Air dia mandefa ny sidina mankany Malaga sy Dortmund amin'ny 21 sy 23 Mey
Wizz Air dia mampiasa ny fiaramanidina A321neos amin'ny rohy espaniola
Ny Wizz Air dia mampiasa A320 hifandraisana amin'i Alemana
Ny seranam-piaramanidina Budapest dia nandray ny fiverenan'ny sidina Wizz Air ho any Malaga sy Dortmund, ny 21 sy 23 Mey lasa teo. Amin'ny fampiasana ny fiaramanidina A321neos ao amin'ny rohy Espaniôla, ary ny A320 hifandray amin'i Alemana, ny mpitatitra lafo indrindra dia hanolotra seza 838 isan-kerinandro (Jona) ho an'ny tambajotram-panitarana miakatra avy any an-drenivohitra Hongroà.
Wizz Air dia nandefa ny asa ho serivisy isan-kerinandro amin'ny toeran-kaleha roa ho an'ny sisa amin'ny Mey, izay efa nanamafy ny fisondrotana matetika amin'ny volana Jona ka hatramin'ny rohy indroa isan-kerinandro.
"Faly izahay fa efa mahita ny fahaizan'ny seza mitombo amin'ny zotra roa, manome safidy ny mpandeha hitety ny firenena tsirairay," hoy ny fanazavan'i Balázs Bogáts, Lehiben'ny Fampandrosoana Airline, seranam-piaramanidina Budapest.
“Avelan'ny Wizz Air hanolotra fifandraisana isan-karazany indray izahay, ary ny safidy voalohany dia toerana mahafinaritra. Amin'ny maha-faritra iray malaza indrindra an'i atsimon'i Espana dia manamarika ny fomba fiaina Andalosiana i Malaga, fa i Dortmund kosa dia ivon-toerana ara-barotra sy ara-kolontsaina any Alemana - samy manana ny fangatahana goavana avy amin'ny seranam-piaramanidintsika izy ireo, ”hoy i Bogáts.